बाँके घटना बारे गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरण : घटनामा संलग्न जोसुकै भएपनि कारबाही हुन्छ, राजनीतिकरण गरिनुहुँदैन् | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more बाँके घटना बारे गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरण : घटनामा संलग्न जोसुकै भएपनि कारबाही हुन्छ, राजनीतिकरण गरिनुहुँदैन्
बाँके घटना बारे गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरण : घटनामा संलग्न जोसुकै भएपनि कारबाही हुन्छ, राजनीतिकरण गरिनुहुँदैन्
भदौ २९ गते, २०७६ - १४:१९
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बाँके घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले बाँके घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको भन्दै अनावश्यक राजनीतिक मुद्दा नगराउन आग्रह गरेका हुन् ।
बाँके घटनाबारे आईतबार सदनमा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले घटनामा संलग्न ३ जनालाई शनिबार नै पक्राउ कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी गराए । गृहमन्त्री थापाले भने, ‘सरकारले घटनाका दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाईसकेको छ । जुनसुकै होस् कानून मिच्ने र शान्ति सुरक्षालाई खलल बनाउने कुराहरु प्रति सरकार गम्भिर छ । त्यसमाथि कडा कारबाही गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं । ’
उनले घटनामा संलग्न नेकपाकै कार्यकर्या भएपनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘नेकपाका कार्यकर्ता हुनसक्छ तर नेकपाको नीति निर्देशन होइन । यो घटनालाई राजनीतिक रुपमा नलिन सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
गृहमन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेसको जागरण अभियानमा आक्रमण गर्ने निर्मल खत्री, रोशन सिंह ठकुरी र लोकबहादुर शाहीलाई पक्राउ गरिसकिएको र बाँकीलाई पक्राउ गर्न सुरक्षा परिचालन गरिएको जनाए ।
स्मरणरहोस्, गत भदौ २६ मा बाँकेको खजुरामा नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको राष्ट्रिय जागरण अभियानको कार्यक्रममा केहि व्यक्तिहरु पसि आक्रमण गरेका थिए । आक्रमण परि नेपाली कांग्रसकी जिल्ला सभापति किरण कोइरालाको हात भाँचिएको छ भने अन्य केहि घाईते भएका थिए ।
भदौ २९ गते, २०७६ - १४:१९ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नवनियुक्त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत हाउ यान्छीबीच भेटवार्ता...
एल.जी. ब्राण्डको प्रिमियम ब्राण्ड शप विराटनगरमा उद्घाटन
काठमाडौं । सि.जी.इलेक्ट्रोनिक्सको १८ औं शोरुम तथा एल.जी.को ८ औं नयाँ प्रिमियम ब्राण्डशप विराटनगरमा...
काठमाडौं । साझा पार्टीले एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न नहुने बताएको छ । एमसीसी सम्झौताबारे...
काठमाडौं । यूरोपेली संघका १५० भन्दा बढि सांसदले भारतीय नागरिकता संशोधन कानूनको विरोधमा प्रस्ताव...
निर्भया हत्या मुद्दा : सर्वौच्चले स्वीकार्यो दोषी मुकेशको निवेदन, फाँसी रोकिन सक्ने
काठमाडौं । निर्भया हत्या मुद्दाका ४ दोषीमध्येका एक मुकेश सिंहले गरेको निवेदन भारतको सर्वौच्च अदालतले...
इसेवा ११ वर्षमा : ३० लाखभन्दा बढिले खोले खाता
काठमाडौं । क्यासलेस अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्दै एक दशक अगाडी सञ्चालनमा आएको नेपालको पहिलो भुक्तानी...
कोरोना भाइरसको महामारी : ८० को मृत्यु, २५ सय हाराहारी संक्रमित
काठमाडाैं । चीनमा कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्म ८० जनाको मृत्यु भएको छ । जसमध्ये हुबेई प्रान्तमा सबैभन्दा...
२३ करोड राजस्व छलीको आरोपमा मुद्धा दायर
काठमाडौं । राजस्व अनसन्धान विभागले नक्कली र झुटा बिल तथा बिजक को आधाारमा राजस्व चुहावट गरेको भन्दै...
के-के षडयन्त्रलाई छल्दै सभामुख बने सापकोटा ?
काठमाडौं । तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनसँगै लामो समय रिक्त भएको प्रतिनिधिसभाले आइतबार...